Crespo; “Higuain ayaa u qalma lacag ka badan middii Pogba lagu iibsaday waayo hal xilli ciyaareed ayuu dhaliyay 36 gool” – Gool FM
Crespo; “Higuain ayaa u qalma lacag ka badan middii Pogba lagu iibsaday waayo hal xilli ciyaareed ayuu dhaliyay 36 gool”
(Buenos Aires), 05 September 2016 –Xidiggii hore ee xulka Qaranka Argentina Hernan Crespo ayaa ka hadlay lacagihii qiimaha badnaa ee xilli ciyaareedkan lagu iibsaday labada ciyaartooy ee Paul Pogba (110 Milyan oo Euro) iyo Gonzalo Higuain (90 Milyan oo Euro) kuwaasoo ku kala biiray Manchester United iyo Juventus.
Crespo oo wareysi siinayay Wargeyska ‘La Nacion’ ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in Higuain uu u qalmay lacagtii ay ku iibsatay Juventus marka la barbar dhigo heshiiskii ugu qaalisanaa taariikhda kubadda cagta ee ay Manchester United ku qaadatay Pogba.
«Ma jirto cid bilaash wax kugu siinaysa, gaar ahaan marka ay timaaddo kubadda cagta, haddii Juventus ay qiimahaasi faraha badan ku iibsatay Higuain, taa macneheedu waa in uu u qalmo lacagtaasi » ayuu wargeyska u sheegay Crespo.
«sida aragtidayda ah waa wax loo qaateen ah 90-ka Milyan oo Euro ee weeraryahan Higuain ku iibsatay Juventus, waayo 36 gool ayuu dhaliyay hal xilli ciyaareed, taasoo wax badan ka fog loo qaateenka lacagtii 110 Milyan ee Euro ahayd ee Man United ay ku bixisay Pogba » ayuu sii raaciyay Crespo.
«Saa waxaan u leeyahay anigoo xushmad u haya Xidigga khadka dhexe ee Faransiiska » ayuu ku daray.
Higuain oo 28 jir ah, ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 35 kulan oo uu u saftay Napoli waxa uu u dhaliyay 36 gool, taasoo noqotay goolashii ugu badnaa ee hal xilli ciyaareed laga dhaliyo taariikhda Serie A-da Talyaaniga.
Dhinaca kale Pogba oo isna laacib da’yar ah ayaa 4 jeer oo xiriir ah hanashada Horyaalka Talyaaniga u horseeday Kooxda Juventus, isagoo kulankiisa ugu horreeya ee Derby Manchester ciyaari doona Sabtida 10 Bishan September, markaas oo Man United Old Trafford ku marti gelin doonto kooxda Manchester City.
Hernan Crespo ayaa mar ahaa laacibka ugu qaalisan kubadda Cagta 2001, markii Lazio ay ku soo iibsatay 35 Milyan oo Euro.
Juventus were “logical” to spend €90m on Higuain than United were to sign Pogba for €110m, according to Crespo. pic.twitter.com/QDhO0Xt7vh
— NaijaBet.com (@NaijaBet) September 5, 2016
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Israel vs Italy 1-3 (Talyaaniga oo guul uu u tabcay Israel kaga tillaabsaday ciyaar Chiellini roose loo taagey)